कुलचन्द्र गौतमसँग दिलभुषण पाठकको बिशेष कुराकानी (छुटाउनै नहुने) – Gulmiews
कुलचन्द्र गौतमसँग दिलभुषण पाठकको बिशेष कुराकानी (छुटाउनै नहुने)
January 15, 2016 Sanju Kauchha
No comments	गुल्मीको अमरपुरमा जन्मनु भएका कुलचन्द्र गौतम संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा पुग्ने एक मात्र नेपाली हुनुहुन्छ । गौतमको बारेमा हामीले धेरि पहिले देखी नै सुन्दै पढ्दै आएका छौँ तैपनि उँहाको बारेमा हामीले थाहा नपाएका कुरा थुप्रै छन् । देशले नै गर्व गर्ने गुल्मेली गौतमसँग कान्तिपुर टि.भीका लागि पत्रकार दिलभुषण पाठकले लिनुभएको बिशेष अन्तर्वाता । कार्यक्रम टफटकका लागि पत्रकार पाठकले तयार पारेको भूमिका यस्तो छ:
आदरणीय दर्शकवृन्द ।
कार्यक्रम टफटकमा तपाई लगायत मेरा सबै सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
आज मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च तहमा पुगेर काम गर्नुभएका कुलचन्द्र गौतमलाई बोलाएको छु, बर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था र भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई विश्लेषण गर्न ।
२००६ साल मंसिर ६ गते गुल्मीको अमरपुर गाउँमा जन्मनु भएका कुलचन्द्र गौतम संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा पुग्ने एक मात्र नेपाली हुनुहुन्छ । विभिन्न तह हुँदै झण्डै साढे तीन दशक लामो सेवा अवधि पुरा गरी सन् २००७ मा उपमहासचिवबाट निवृत हुनु भएका गौतम् केही समय यता नागरिक अगुवाको भूमिकामा सकृय हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको माथिल्लो ओहदामा रहेर विश्व राजनीतिलाई नियाल्नु भएका गौतमलाई आज म भारतले नेपालमा लगाउँदै आएको अघोषित नाकावन्दी, यसले दुई देशको सम्वन्धमा आएको चिसोपन लगायतका विषय बस्तुमा कुरा गर्न टफटकमा निम्त्याएका छु ।
Related Posts	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापा...	October 21, 2016	चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो र...	October 13, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	युवा संघ रेसुङ्गा नगरको अध्यक्ष बस्याल निर्बाचित